Netherlands: NS oo Hirgalinaysa Sharci Cusub si ay u Difaacdo shaqaalaheeda – fogaanarag
Wararka / Wararka Holland | By Jama
Shirkadda trainada Netherlands ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano NS ayaa ku dhawaaqay in ay kordhinayso shaqaalaha trainada iyo in ay qaadanayso 100 waardiyayaal oo dheeraad ah oo ilaaliya xarumaha trainada kana hortagaan rabashadaha soo baday ee loo gaysto shaqaalaheeda.
Go’aankaan ayaa ka soo baxay kullamo ay yeesheen ururada u doodaxuquuqda shaqaalaha trainadda oo ay xal ugu doonayaan rabshadaha soo kordhay ee ka dhanka ah shaqalahooda sida ay sheegtay wakaalada wararka ee ANP.
Trainada ayaa habeenadda qaar waxaa saaran labo shaqaale gaar ahaan dhamaadka todobaadka ama weekendiga waxaana hada ay go’aamiyeen in ay labo ahaadaan habeenkasta, iyadoo waliba si gaar ah ay ula soconayaan xaalada habeenada mashquulka badan ee guryaha laga soo baxo ee Khamiista, Sabtida iyo Axada.
Go’aamadaan ayaa ka dambeeyay markii dhowaanahaan ay soo bateen rabshadaha lagala hortago shaqaalaha trainda, bishii la soo dhaafay ayay aheyd markii haweenay ka tirsan shaqaalaha si xun loogu dhaawacay agagaarka Hoofddorp, sidoo kale afar dhalinyaro ah ayaa garaacay todobaadkii hore shaqaale iyo qof rakaab ahaa.
Horaantii bishaan labo nin ayaa loo xiray weerar ay ku qaadeen shaqaale train oo ku sugnaa Almelo, Ururadda u dooda xuquuqda shaqaalaha trainda ayaa todobaadkii hore ku baaqay in darawalada iyo kirishbooyada trainada lagu hubeeyo garuumo iyo biifbaafta dadka ka ilmaysiisa, hase ahaatee mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in marka hore ay soo baarayaan suuragalnimada arinkaas.